रैंक मठ एसईओ WordPress प्लगइन आश्चर्यजनक छ! | Martech Zone
रैंक मठ एसईओ WordPress प्लगइन आश्चर्यजनक छ!
शनिबार, जून १,, २०१। शनिबार, जून १,, २०१। Douglas Karr
वस्तुतः हरेक वर्डप्रेस ग्राहक र हामीले हेर्ने सबै सम्भावना बारे Yoast को WordPress SEO प्लगइन खोज ईन्जिन अनुकूलनको लागि प्रमुख तत्वहरू प्रबन्ध गर्न प्रयोग गर्दछ। नि: शुल्क प्लगइनको बाहेक, योआस्टले विशेष प्लगइनहरूको एर्रे पनि प्रदान गर्दछ।
मैले सँधै योओस्टको एसईओ प्लगइन एकदम राम्रो पाएको छु, तर त्यहाँ पाल्तु पिभहरू छन् जुन मसँग थिए:
योआस्ट एसईओ प्रशासनिक प्यानलको आफ्नै प्रयोगकर्ता अनुभव छ जुन WordPress को पूर्वनिर्धारित प्रयोगकर्ता अनुभव भन्दा फरक छ।
Yoast सधैं मान्छेहरु लाई एक वा बढी तिनीहरुको सशुल्क प्लगइनहरुमा रूपान्तरण गर्न धकेल्छ। नमस्ते ... उनीहरूले एक निःशुल्क फ्रि प्लगइन प्रदान गरे जुन व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको छ, त्यसैले म तिनीहरूलाई त्यसलाई मोनेटाइज गरेको हेर्न चाहन्छु। यद्यपि कहिलेकाहिँ यो मेरो विचारमा अलि बढी धक्का लाग्ने कुरा हो।
यो Yoast प्लगइनका लागि पर्याप्त संसाधनहरू चाहिन्छ र मेरो साइटलाई ढिलो गर्दैछ।
हामी जान्दछौं - मोबाइल र खोजी महत्वपूर्णको साथ - कि तपाईं सयौं वा हजारौं आगन्तुकहरू गुमाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईंको पृष्ठ लोड समय तपाईंको प्रतिस्पर्धी भन्दा ढिलो छ भने ... त्यसैले गति मेरो लागि महत्वपूर्ण मुद्दा हो।
रैंक मठ WordPress WordPress प्लगइन
मेरो साथी, लोरेन बल, रैंक म्याथ एसईओ प्लगइन उल्लेख गर्‍यो र मैले यसलाई तुरून्त जाँच गर्नुपर्‍यो। लोरेन एजेन्सी, राउन्डपेग, एक ग्राहकहरु को लागी सुन्दर र किफायती WordPress साइटहरु बनाउँछ। म तत्काल प्लगइन जाँच गर्न चासो राख्दै थिएँ र यसलाई प्रदर्शन गरेको राम्रोसँग हेर्नका लागि यसलाई धेरै साइटहरूमा लोड गरियो।
योस्ट एसईओ प्लगइनबाट र्यांक म्याथमा रूपान्तरण गर्ने विजार्ड सरल छ। प्लगइनको अर्को फाइदा यो हो कि तपाईंसँग यो आयात र तपाईंको साइट पुनर्निर्देशनहरू नियन्त्रण गर्न पनि सक्दछ। म चाहन्छु कि उनीहरूले तपाईका रिडिरेक्टहरू व्यवस्थित गर्न समूहहरू प्रस्ताव गरे, तर प्लगइनहरूको संख्या घटाउने सुविधाको नोक्सान गर्न लायक छ।
म विशेष रूपमा र्यांक मठको सामग्री विश्लेषकको सराहना गर्दछु, जुन SEO लक्षित व्यक्तिहरूको लागि लक्षित हुन सक्ने कुञ्जी शब्दहरूको लागि सामग्री लेख्न र सुधार गर्नको लागि राम्रो छ।
रैंक मठ लाभ र सुविधाहरू
सेटअप विजार्ड अनुसरण गर्न सजिलो - रैank्क म्याथ व्यावहारिक रूपमा आफूलाई कन्फिगर गर्दछ। रैंक म्याथले एक चरण-देखि-चरण स्थापना र कन्फिगरेसन विजार्डको सुविधा प्रदान गर्दछ जुन राम्रोसँग WordPress को लागी SEO सेट अप गर्दछ। स्थापना पछि, रैank्क म्याथले तपाईंको साइटको सेटिंग्स प्रमाणित गर्दछ र उत्तम प्रदर्शनको लागि आदर्श सेटिंग्स सिफारिश गर्दछ। चरण-देखि-चरण विजार्डले तपाइँको साइटको एसईओ, सामाजिक प्रोफाइलहरू, वेबमास्टर प्रोफाइलहरू, र अन्य एसईओ सेटिंग्स सेट अप गर्दछ।
सफा र सरल प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस - रैank्क म्याथ सही जानकारी तपाईंलाई सही समयमा प्रस्तुत गर्न डिजाइन गरिएको हो। सरल, तर शक्तिशाली उपयोगकर्ता ईन्टरफेसले पोष्टको साथमा तपाईंको पोष्टहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी हाइलाइट गर्दछ। यस जानकारीको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो पोष्टको एसईओ लाई तत्काल सुधार गर्न सक्नुहुनेछ। रैंक म्याथले उन्नत स्निपेट पूर्वावलोकन पनि प्रदान गर्दछ। तपाईं पूर्वावलोकन गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको पोष्ट कसरी SERPs मा देखा पर्नेछ, पूर्वावलोकन रिच स्निपेटहरू, र पूर्वावलोकन पनि कसरी गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको पोष्ट कस्तो देखिन्छ जब सोशल मीडियामा साझा गरिन्छ।
मोड्युलर फ्रेमवर्क - तपाईले चाहानु भएको मात्र प्रयोग गर्नुहोस् र बाँकीलाई असक्षम गर्नुहोस्। रैंक मठ एक मोड्युलर फ्रेमवर्कको प्रयोग गरेर बनेको छ त्यसैले तपाईंसँग आफ्नो वेबसाइटको पूर्ण नियन्त्रण हुन सक्छ। असक्षम वा सक्षम गर्नुहोस् मोड्युलहरू जब तपाईंलाई उनीहरूको आवश्यक पर्दछ।
कोड गतिको लागि अनुकूलित गरियो - हामीले कोडलाई स्क्र्याचबाट लेख्यौं र सुनिश्चित गर्नुहोस् कि कोडको हरेक लाइनको एक उद्देश्य छ। हामीले यसमा वर्षौं बर्षो अनुभव राख्यौं त्यसैले प्लगइन यो छिटो छिटो छिटो हुन्छ।
MyThemeShop पछाडि व्यक्तिहरूद्वारा सिर्जना गरिएको - रैank्क म्याथको साथ, तपाईंलाई थाहा छ तपाईं राम्रा हातहरूमा हुनुहुन्छ। कोडि and र १ 150०+ वर्डप्रेस उत्पादहरूको पोर्टफोलियो कायम राख्न हामीलाई एक वा दुई चीज राम्रो प्लगइनहरू बनाउन सिकाइएको छ। र हामीले हाम्रा सबै ज्ञानहरू र्याक म्याह कोडिंगमा राख्यौं।
उद्योग अग्रणी समर्थन - हामी हाम्रो आफ्नै ख्याल राख्छौं। तपाई र्याँक मठ प्रयोग गर्नुहुँदा तपाईलाई उच्च र सुख्खा छोडिने छैन। हामी समर्थन क्वेरीहरूको लागि सब भन्दा छिटो घुमाउरो समय प्रस्ताव गर्दछौं र बगहरू छिटो तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
मैले मेरो सिफारिश सूची अपडेट गरेको छु व्यवसायका लागि WordPress प्लगइनहरू Yoast र पुनर्निर्देशनको लागि प्रतिस्थापनको रूपमा रैंक म्याथको साथ। म पक्का छु तपाईंले लाभहरू देख्नुहुनेछ।
रैंक म्याथ हेर्नुहोस्
टैग: सामग्री विश्लेषणकिवर्डश्रेणी गणितएसईओ प्लगइनसाईटम्यापहरूWordPress प्लगइनxML साइटम्यापहरूyoast
एजेन्सीहरूका लागि पाँच शीर्ष सुझावहरू संकटमा नयाँ राजस्व स्ट्रिमहरू निर्माण गर्न खोज्दै
२ गुगल क्यालेन्डरहरू कसरी सिnch्ख्रोनाइज गर्ने